Doogee V20: vidiny sy daty famoahana | Vaovao momba ny gadget
Doogee V20: vidiny sy daty famoahana
Ignatius Room | 13/01/2022 08:56 | Finday
Iray amin'ireo mpanamboatra smartphone izay nifantoka tamin'ny asany tamin'ny finday avo lenta tao amin'ny Doogee, mpanamboatra iray izay manomboka isan-taona. fitaovana isan-karazany ho an'ny teti-bola rehetra ary noho izany dia mahafeno ny filan'ny mpampiasa marobe.
Ity mpanamboatra ity dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny terminal vaovao. Miresaka momba ny Dodge V20, terminal iray izay tian'ity mpanamboatra ity hametraka ny tenany ho a benchmark ao amin'ny sehatry ny finday avo lenta, tsy noho ny fanoherana azy ihany fa noho ny fahombiazany avo lenta ihany koa.
Raha mitady smartphone manjavozavo ianao ary ny mpanamboatra Doogee dia anisan'ireo marika heverina ho safidy, dia hasehonay anao ny fepetra rehetra momba ny Doogee V20 vaovao.
1 Ireo singa mifandraika amin'ny Doogee V20
3 Fampisehoana AMOLED
4 Fakan-tsary 3 ho an'ny toe-javatra rehetra
5 Mahatohitra ny karazana dona rehetra
6 Bateria 2 andro
7 Ny vidiny sy ny fotoana nitarika ny Doogee V20
Ireo singa mifandraika amin'ny Doogee V20
processeur 8 cores miaraka amin'ny chip 5G
Fahatsiarovana RAM LPDDR8x 4 GB
fitehirizana 266 GB UFS 2.2 - azo itarina amin'ny 512 GB miaraka amin'ny karatra microSD
Main screen AMOLED 6.4-mirefy novokarin'ny Samsung - Fanapahan-kevitra 2400 x 1080 - Salan'isa 20: 9 - 409 DPI - Mifanohitra 1: 80000 - 90 Hz
Fampisehoana faharoa Any aoriana eo akaikin'ny maody sary misy 1.05 santimetatra
Fakan-tsary aoriana 64 MP sensor lehibe miaraka amin'ny Artificial Intelligence - HDR - Night mode
20 MP sensor fahitana alina
Rafitra fandidiana Android 11
Fanamarinana IP68 - IP69 - MIL-STD-810G
hiraIA 6.000mAh - Manohana famandrihana haingana 33W - Manohana famandrihana tsy misy tariby 15W
Votoatin'ny boaty Charger 33W - Cable charging USB-C - Boky torolalana - Mpiaro ny écran
Raha tsy manavao ny smartphone isan-taona ianao dia tokony hanomboka handinika ny mety ho mifidiana modely 5G.
Na dia mbola misy fotoana kely ihany aza ho an'ny tambajotra 5G manerana an'i Espaina sy any ivelany, ny fahazoana smartphone toa ny Doogee V20 5G dia ahafahanao dAnkafizo ny hafainganam-pandeha ambony indrindra amin'ny fitaovanao mandritra ny taona maro ho avy.
Ny Doogee V20 dia tantanan'ny a 8 processeur fototra, miaraka amin'ny fahatsiarovana LPDDR8X karazana RAM 4 GB mba hampandehanana ny lalao sy ny fampiharana amin'ny hafainganam-pandeha ambony indrindra.
Mikasika ny fitahirizana, iray amin'ireo teboka manan-danja indrindra amin'izao fotoana izao rehefa mividy smartphone, miaraka amin'ny Doogee V20 dia tsy ho tavela isika, satria misy 256 GB amin'ny karazana habaka UFS 2.2. Raha lavo izy dia azonao atao ny manitatra ny habaka amin'ny karatra microSD hatramin'ny 512 GB ambony indrindra.
Ao anatin'ny Doogee V20 dia hitantsika Android 11, izay ahafahantsika mametraka ny rindranasa rehetra hita ao amin'ny Play Store.
Ny dikan-Android hita ao amin'ny Doogee V20, dia misy a sosona fanamboarana kely indrindra, noho izany dia tsy ho manahirana ny mahazo tombony betsaka amin'izany tsy mijaly amin'ny fampiharana izay matetika apetraky ny mpanamboatra ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy misy mampiasa.
Satria lasa malaza ny vidin'ny efijery misy teknolojia OLED, te-hankafy ny kalitao atolony antsika ny rehetra. Ny Doogee V20 dia misy a Efijery karazana AMOLED novokarin'ny Samsung (ny mpanamboatra efijery finday lehibe indrindra eran-tany).
Ny efijery dia mahatratra 6,43 santimetatra miaraka amin'ny famahana ny 2400 × 1080 teboka, ny famirapiratana 500 nits ary ny mifanohitra amin'ny 80000: 1., ny hakitroky ny pixel 409 ary ny fandrakofana loko 105% amin'ny gamut NTSC.
Ho fanampin'izay, manana a Taham-pamelombelona 90 Hz. Noho io tahan'ny famelombelomana avo io, na ny lalao miaraka amin'ny rindranasa sy ny fitetezam-tranonkala dia hampiseho fitetezana malefaka kokoa rehefa mampiasa azy ireo isika.
Ny efijery voalohany amin'ity fitaovana ity Tsy ny iray ihany no ahitana, satria, any aoriana, dia hahita efijery 1,05-inch ihany koa isika ao ambadika, eo ankavanan'ny module fakan-tsary.
Ity ecran mini ity dia azo amboarina amin'ny endrika famantaranandro isan-karazany hanehoana ny ora, ny bateria ... ary koa ny fahafahana mampiasa azy hanantona na handray antso, jereo ny fampahafantarana sy fampahatsiahivana… Raha toa ianao ka manana telefaonina mitodika midina eo amin'ny latabatrao ny telefaona, ity karazana efijery ity dia mety aminao.
Fakan-tsary 3 ho an'ny toe-javatra rehetra
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, ao ambadiky ny Doogee V20 dia mahita a sary module misy fakan-tsary 3, fakan-tsary ahafahantsika mirakitra saika ny zavatra ilaina rehetra, na an-kalamanjana, an-trano, na alina ...
64 MP sensor lehibe miaraka amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy. Izy io dia manana aperture f / 1,8 ary zoom optika X.
Fakantsary an'ny Fahitana alina 20 MP izay ahafahantsika maka sary sy horonan-tsary ao anaty haizina (mitovy amin'ny fakantsary fiarovana rehetra izany).
8 MP zoro somary malalaka izay manome antsika zoro fijerena 130 degre, mety tsara ho an'ny sarin'ny tsangambato, vondron'olona, ​​atitany ...
La fakantsary anoloana an'ny Doogee V20 Manana famaha 16 MP izy io.
Mahatohitra ny karazana dona rehetra
Raha mitady smartphone mahery vaika mahatohitra ny tontolo iainana sy ny fahatairana rehetra ianao tsy mahafoy ny teknolojia maoderina indrindra, ny Doogee V20 no smartphone tadiavinao.
Ny Doogee V20 dia tsy manana ny fanamarinana mahazatra IP68 sy IP69K, fa misy ihany koa ny fanamarinana kilasy miaramila, MIL-STD-810.
Ity fanamarinana ity dia tsy hanakana ny vovoka na rano tsy hiditra amin'ny fitaovanay, fa koa miaro ny fitaovana alohan'ny fiovana tampoka amin'ny hafanana.
Bateria 2 andro
Ny bateria izay hitantsika ao anatin'ny Doogee V20 dia mahatratra ny 6.000 Mah, fahafahana mamela antsika hankafy ity fitaovana ity tsy tapaka mandritra ny 2 na 3 andro.
Ankoatr'izay dia mifanaraka amin'ny 33W fiampangana haingana amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo USB-C. Izy io koa dia manohana ny famandrihana tsy misy tariby 15W.
Ny vidiny sy ny fotoana nitarika ny Doogee V20
Ny Doogee V20 dia ho tonga eny an-tsena amin'ny 21 febroary ary hanao izany amin'ny loko 3: Knight mainty, divay mena y phantom grey ary karazany 2 vita: fibre karbônina sy vita matte.
Para mankalaza ny fandefasana ny tsenan'ny Doogee V20, ny mpanamboatra dia manolotra amidy ny singa 1.000 voalohany amin'ny fihenam-bidy $ 100 mihoatra ny vidiny mahazatra, miaraka amin'ny vidiny farany amin'ny $ 299.
El vidiny mahazatra amin'ity terminal ity, rehefa tapitra ny fampiroboroboana dia 399 dolara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Doogee V20: vidiny sy daty famoahana
Roborock dia mamorona indray ny indostria amin'ny CES 2022